Fivoahan’ny Asafa 2 tonony - Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara
Fivoahan’ny Asafa 2 tonony
“Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika” Romana 15 : 6
An-kafaliana hatrany no iarahabana anareo rehetra amin’ny alalan’i Kristy Jesosy.
Araka ny efa rentsika dia nametraka ny “projet” Asafa 2 tonony teo anatrehan’Andriamanitra isika izay nokasaina hivoaka amin’ity taona ity. Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa tontosa izany ary efa niditra tao amin’ny Trano Printy Loterna Malagasy (TPFLM) tamin’ny volana mey lasa teo.
Noho izany dia manambara aminareo etoana fa hivoaka amin’ny faha 15 jiona 2018 ho avy izao ireo asafa ireo ary miisa 500 no natonta tamin’izany ary hamidy 10.000 Ariary. Toy izao manaraka izao ny fandaminana :
Ho an’Antananarivo 12 trano sy Antsirabe 4 trano aloha ireo 500 ireo mba ahafahana manonta 1000 isa manaraka indray izay haparitaka eran’ny Madagasikara. Misaotra mialoha ny any amin’ny faritra ny amin’ny fanekena ny fandaminana. Ho avy manaraka eo ny taratasy manindry ny lamina ny amin’ny komandy any amin’ny faritra.
Ny ao Antananarivo sy Antsirabe noho izany no afaka manao komandy amin’io 15 jiona io ary ny komandy dia arahim-bidy avy hatrany satria hizara io Asafa eraky ny 12 trano ny komity ny alahady 17 jiona. Noho izany dia hiantso mialoha ny FBB tsirairay ny Komity ny amin’ny fizarana azy io.
Hahazo avokoa ny FBB 16 trano (Antananarivo sy Antsirabe) koa raha misy Fiangonana iray izay mihoatry ny rasa tokony ho azy ny komandy ao aminy dia ireo nandoa vola mialoha ao amin’io FBB io no mahazo mialoha. Ho hita eo avy eo raha misy ny ambiny ny any amin’ny FBB hafa. Raha ohatra ka tsy nahazo mihitsy ny olona nandoa vola noho ny fahalanian’ireo 500 isa dia lasa loha-laharana amin’ireo 1000 isa hatonta manaraka izireo.
Izay solotenam-piangonana mandray ny komandy sy ny vola dia iangaviana hiantso ny mpitahiry volan’ny Komity FIDERANA Atoa Marinjaka RASALOFO (034 01 789 90) ny amin’ny fomba hanomezana ireo vola mialohan’ny alakamisy 14 jiona izao arahin’ny lisitry ny olona nahavita komandy.
Dia izay indray no vaovao azo ampitaina ary mamerina ny fisaorana ireo olona nanampy rehetra na ara-bola na ara-bavaka sns tamin’ny fanontana iny 500 isa voalohany iny. Hinoanay fa hitohy hatrany ny fiaraha-miasa ho fampandrosoana ny asan’ny Tompo eo anivon’ny Fiderana.Ho Azy irery ny Voninahitra ary ho amintsika kosa ny Fiadanany.
Ny Filohan’ny Sampana FIDERANA,
Atoa RAKOTONIRAINY Gabriel
Ny Mpiandraikitra ny SAMPANA-FFBBM,
Loh RABEARISOA René